टोयोटीमी हाइडोसोस जीवनी
जापानको महान इनिफाफा, 1536-1598
टोयोटोमी हाइडईशीशी 1536 मा नाकामुरा, ओवारी प्रांत, जापानमा जन्मिएको थियो । उनको पिता ओडा क्लानको लागि किसान किसान / अंशकालिक सैनिक थिए। केटाकेटी सात वर्षको हुँदा उनको मृत्यु भएको बेला 1543 मा मृत्यु भएको थियो, र हाइडोसोसकी आमालाई तुरुन्तै पुनर्जीवित भयो। उनको नयाँ पतिले ओवा क्षेत्रको दामा ओडा नोबह्वेलाई पनि सेवा गर्थे।
हिडीयोशी तिनको उमेर, पातलो र बदलीको लागि सानो थियो। शिक्षा पाउनको लागि तिनका आमाबाबुहरूले मन्दिरमा पठाउनुभयो, तर केटा साह्रै साहसी खोज्यो।
1551 मा उनले मट्सुशिता युइटितुना सेवा, जो टोटोमी प्रांतका शक्तिशाली इम्बावावा परिवारका एक संरक्षक हुन्। हिडिओसीको बुबा र तिनका पलायनका पिताले ओडा क्यान्सरको सेवा गरिसकेपछि यो असामान्य थियो।
हाइडिओशी 1558 मा घर फर्के र उनी डेमीको छोरा ओडा नोुनगागालाई सेवा प्रदान गरे। समयमा, 40,000 को कल्पनावा क्लानको सेना हाइडोशीको घर प्रान्त ओवारीमा आक्रमण गरिरहेको थियो। हिडीयोशीले एकदमै ठूलो जुवा गरे - ओडा सेना को लगभग 2,000 को संख्या मा। 1560 मा, इम्पावा र ओडा सेनाहरू ओखहजामा युद्धमा भेटिए। ओडा नोब्यगागाको सानो बलले इम्वावा सैनिकहरूलाई ड्राइभिङ्ग बारम्बारमा घुमायो, र आक्रमणकारीलाई टाढा गाडेर अविश्वसनीय विजयी बनायो।
लिजेंड भन्छन् कि 24 वर्षीया हाइड्योशीले नोनगागाको स्यान्डल भाडाको रूपमा यस युद्धमा सेवा गरे। तथापि, 1570 को दशक सम्म हाइडोशी को नोबुगागा को जीवित लेख लेखन मा नहीं आती।
छ वर्ष पछि, हिड्योशीले एक आक्रमणको नेतृत्व गरे जुन असामामा क्यासलले ओडी क्यान्सरलाई कब्जा गर्यो।
ओडा नुनगुगाले उनलाई सामान्य बनाएर इनाम दिए।
1570 मा नोबुनागाले ओडानीलाई आफ्नो भदौलमाथि आक्रमण गरे। हिड्नेशीले एक हजुरआमाले महान् विरुद्ध एक हजार समुराईको पहिलो तीन डिटेम्बरको नेतृत्व गरे। नोनगागाको सेनाले घोडा-माउन्ट तलवारहरू भन्दा सट्टा आगो नियन्त्रणको नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्यो।
तथापि मस्कटले महल भित्ताहरू विरुद्ध धेरै प्रयोग गरिरहेको छैन, तथापि, ओडा सेनाको हाइडोशी को खण्ड एक घेराबन्दीको लागि बसे।
1573 सम्म, नुनुगागाका सेनाहरूले यस क्षेत्रमा आफ्ना सबै शत्रुहरूलाई पराजित गरेका छन्। उनको भाग को लागि, हिडीयोशीले ओमी प्रांत भित्र तीन क्षेत्रहरु को डेमीयो जहाज प्राप्त गरे। 1580 सम्म, जापानमा 66 वटा प्राध्यापकहरुमध्ये 31 जना ओडा नुनुगागाले बलियो शक्ति पाएको थियो।
1582 मा, नोनगुगाको सामान्य आँची मित्सुइडले आफ्नो राजा, आक्रमण र अधिवेशनको अधिवेशन नबनागाको विरुद्धमा आफ्नो सेना बनायो। नोनगागाको राजनयिक मञ्चले मित्सुइजको आमाको होहस हत्या गरेको थियो। Mitsuhide बाध्यता ओडीए Nobunaga र उनको सबै भन्दा ठूलो छोरा seppuku प्रतिबद्ध।
हिड्नेशीले मित्सुइहको दूतहरूमध्ये एकलाई पक्राउ गरे र अर्को दिन अर्को नोब्युगाको मृत्युबाट सिके। उनी र अन्य ओडा जनकहरू, टोकुगावा इयोजु सहित, आफ्नो प्रभुको मृत्युको बदला लिनको लागि दौड्यो। हिडिओशी पहिलो मित्सुइड संग पकडे, नोआगागा को मृत्यु को 13 दिन पछि उनलाई यमजाकी को युद्ध मा हराए र उनको हत्या।
ओडा क्याननमा एक उत्तराधिकारी लडाइयो। हिडिओशीले नोब्युगागाको पोते, ओडा हाइडेनबूलाई समर्थन गरे। टोकुगावा इयौसुले ओडेन नोबुकुत्सु, सबैभन्दा पुरानो बाँकी छोरालाई मन पराए।
Hideyoshi, Oda दाईको रूपमा Hidenobu स्थापना गर्न सफल भयो। लगभग 1584, हिड्योशीशी र टोकुगावा इयौसु अन्तर्वार्तामा संलग्न छन्, कुनै पनि निर्णायक।
नागाकुटको युद्धमा, हाइडोशीका सेनाहरू कुचल भए, तर इयूसुले तिनका तीन जना जेष्ठहरू हराए। यस महंगा लडाइँको आठ महिनापछि, आयोआसुले शान्तिको लागि शुभकामना दिए।
हाइड्योशीले अहिले 37 प्रांतहरू नियन्त्रण गरे। संयोगमा, हिड्नेशीले टोकुगावा र शिबाटा क्लान्समा आफ्ना पराजित भएका विद्रोहीहरूलाई भूमि वितरण गरे। उहाँले भूमिलाई सामभाषा र नोबुटकालाई पनि दिनुभयो। यो एक स्पष्ट संकेत थियो कि उसले आफ्नै नाममा शक्ति लिइरहेको थियो।
हाइड्योशी जापानलाई पुन: दोहोर्याउँछ
1583 मा, हिडिओशीले ओसाका क्यासलमा निर्माण गरे, तिनको शक्ति र जापानको सबै शासन गर्ने उद्देश्यको प्रतीक। नोन्नुगागा जस्तै, उनले शोगुनको शीर्षकलाई इन्कार गरे। केही अदालतले एक किसानको छोरालाई कानुनी रूपमा यो शीर्षकको दाबी गर्न सकेन; हाइदेसोशीले कम्पाकुवाको शीर्षक वा "रिजन्ट" को रूपमा सम्भावित शर्मिन्दा बहसलाई पराजित गर्यो। त्यसपछि हाइडिओशीले धनी शाही महललाई बहाल गर्न आदेश दिए, र नगद-खपत भएका साम्राज्य परिवारलाई पैसाको उपहार प्रदान गर्यो।
हिडिओशीले पनि दक्षिणी टापु क्युशू आफ्नो अधिकारको अधीनमा ल्याउन निर्णय गरे। यो टापु प्राथमिक व्यापारिक बंदरगाहहरूको घर थियो जसको माध्यम ले चीन , कोरिया, पोर्तुगल र अन्य राष्ट्रहरूले जापानमा आफ्नो मार्ग बनाए। क्युसुूका थुप्रै दाईले पोर्चुगल व्यापारिक र जेस्सुइट मिशनरीजहरूको प्रभाव अन्तर्गत ईसाई धर्म परिवर्तन गरे; केहि शक्ति द्वारा परिवर्तित भएको थियो, र बौद्ध मंदिरहरु र Shinto मूर्तिहरु नष्ट।
1586 को नवंबरमा, हिडिओशीले क्युसुूलाई ठूलो आक्रमण बल पठाए, जसमा 250,000 भन्दा बढी सेनाहरू थिए। स्थानीय डिमोले आफ्नो पक्षलाई पनि सम्बोधन गरे, त्यसोभए त्यसले सबै प्रतिरोधलाई कुचाउन ठूलो सेनाको लागि लामो समय सम्म लागेन। सामान्य रूपमा, हिडिओशीशीले सबै देशलाई भत्काइदिए, त्यसपछि आफ्नो पराजित भक्तहरूमा सानो भाग फर्काइन्, र उनीहरूको सहयोगीहरूलाई धेरै ठूला फफुद्धहरूको साथ इनाम दिए। उनले क्युसुउमा सबै मसीही मिसनरीहरूको निष्कासन पनि गरे।
अन्तिम पुनःनाम अभियान 1599 मा भएको थियो। हाइडोशीले शक्तिशाली होजो क्लानलाई पराजित गर्न 200,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू, अर्को ठूलो सेना पठाए, जसले एडो (अब टोक्यो) को वरपर शासन गरे। इयुआसु र ओडा नोकुकुत्सुले सेनाको नेतृत्व गरे, समुद्री सेनाले भर्खरै समुद्रको होजो प्रतिरोधीलाई बोलाउन एक नौसेना बलमा सामेल गर्यो। निर्मल दाको, होजो Ujimasa, ओडेवाारा कैसल फिर्ता गए र हिडिओशी को प्रतीक्षा गर्न को लागि बसे।
छ महिना पछि, हाइडोशीलाई यूजेसाको भाईमा होजो दामाको आत्मसमर्पणको लागि सोध्न पठाइएको थियो। उनले इन्कार गरे, र हिड्योशीशीले महलमा तीन-दिन, आलोचनात्मक आक्रमण सुरु गरे। अन्ततः उनको बेटाले महललाई आत्महत्या गर्न पठायो।
हाइड्योशीले सिपाको प्रतिबद्ध गरेका थिए। उहाँले डोमेनहरू भत्काउनुभयो र Ujimasa को छोरा र भाइ बहिष्कारमा पठाउनुभयो। ठूलो होजो क्लान लाई हटाइएको थियो।
1588 मा, हाइडोशीले सबै जापानी नागरिकहरूलाई सामूर्या को बाहिरी हथियारको प्रयोग नगरे। यो " तलवार हंट "ले किसान र योद्धा-भिक्षुहरूलाई गुमाए, जसले परम्परागत रूपमा हतियार राखेका थिए र युद्ध र विद्रोहहरूमा भाग लिइन्। हिड्नेशी जापानको विभिन्न सामाजिक वर्गहरूको बीचमा सीमाहरू र भिक्षुहरू र किसानहरूद्वारा विद्रोहीहरू रोक्न चाहन्थे।
तीन वर्ष पछि, हाइड्योशीले अर्को आदेशलाई रोलिन भर्ती गरेकी थिइन्, किनकि मालिकको मालिकले समुराईलाई भोग्नु पर्यो। शहरहरू पनि व्यापारीहरू वा शिल्पकारहरू हुन अनुमति दिनदेखि रोकिएका थिए। जापानी सामाजिक अर्डर पत्थरमा राखिएको थियो; यदि तपाईं एक किसान जन्मेको भए, तपाईं एक किसानलाई मर्नुभयो। यदि तपाइँ एक विशेष दामाको सेवामा जन्मे एक समुराई थिए, त्यहाँ तपाईं रुनुभयो। हिड्नेशी आफैं किसान वर्गबाट ​​गुम्बा बनेको थियो। यद्यपि, यस पाखण्डीय आदेशले शान्ति र स्थिरताको शताब्दीको लामो युगमा सहयोग गर्न मद्दत गर्यो।
डाइमी चेकमा राख्नको लागि, हिडोसोशीले तिनीहरूलाई आदेश दिए कि उनीहरूलाई पत्नी र बच्चाहरूलाई राजधानीको रूपमा राजधानीमा पठाउँछन्। डेमीले आफ्नो फफ्स र राजधानीमा वैकल्पिक वर्ष खर्च गर्दछन्। यस प्रणालीले सिंकिन कोटीई भनिन्छ वा " वैकल्पिक उपस्थिति " लाई 1635 मा कोडित गरियो, र 1862 सम्म जारी राख्यो।
अन्ततः, हिडिओशीले राष्ट्र राष्ट्रको जनसंख्या जनगणना र सबै मुलुकका सर्वेक्षणको आदेश दिए। यो विभिन्न डोमेनहरूको सही साइज न केवल मापा तर रिश्तेदार प्रजनन र अपेक्षित फसल उत्पादन पनि।
यो सबै जानकारी कर निर्धारण दरहरू सेट गर्नको लागि कुञ्जी थियो।
1591 मा, हाइडोशीको मात्र पुत्र, एक सुरू नामुरुरुत्सु नामक अचानक मृत्यु भयो, छिट्टै पछि हाइडोनीको अर्ध-भाइ हाइडेनगा। कम्पाकुवाले हाइडेनगाको छोरा हाइडसेटुगललाई आफ्नो वारिसको रूपमा ग्रहण गरे। 15915 मा, हाइडिओशी तयू र सेवानिवृत्त रेजिमेन्ट भए, जबकि हडिट्सग्वुले कम्पाकुउको शीर्षक लिनुभयो। यो "सेवानिवृत्ति" नाम मा मात्र थियो, तथापि - हाइदेसीले आफ्नो सत्तालाई शक्तिमा बनाए।
तथापि, हाइडोसीको कन्टेनर चाचाले नयाँ पुत्रलाई जन्म दिए। यो बच्चा, हाइडोरीले हाइडिट्सुगुलाई गम्भीर खतरा देखाउँछन्; हिड्नेशीले आफ्नो अनुहारको कुनै पनि हमलाबाट बच्चाको सुरक्षा गर्न पोस्ट गरी शरीरका गार्डहरूको एकदम बलियो बल थियो।
Hidetsugu देश भर मा एक क्रूर र रगत प्यास मान्छे को रूप मा एक राम्रो प्रतिष्ठा विकसित। उनी आफ्नो मास्क संग ग्रामीण क्षेत्रमा बाहिर जान्थे र आफ्नो खेतीमा बसोबास गर्न को लागी खेती गर्न थाले। उहाँले आफ्नो तरवारको साथ अपहरण गरेको अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्ने कामलाई सताउने अभियोगर पनि खेल्नुभयो। हिड्नेशीले यो खतरनाक र अस्थिर मानिसलाई सहन सकेन, जसले बच्चा हाइडोरीलाई स्पष्ट धम्की दिए।
1595 मा, उनले हिडिट्सुगुलाई आरोप लगाएका थिए कि तिनलाई पराजित गर्न थाल्नुभयो, र तिनलाई सप्पुक गर्न आदेश दिए। Hidetsugu को टाउको उनको मृत्यु पछि शहर को पर्खालहरुमा प्रदर्शित भएको थियो; चम्किलो भई, हिड्नेशीले आफ्नी श्रीमती, संगमरमर र छोराछोरीहरूलाई एक-एक महिनाकी छोरीलाई बाहेक क्रूर रूपमा मारिएका थिए।
यो अत्यधिक क्रूरता हाइड्योशीको पछिल्ला वर्षमा पृथक घटना थिएन। उनले आफ्नो मित्र र शिक्षक, 15959मा 69 बर्षको उमेरमा 69 वर्षको उमेरमा सेप्पाको कार्य गर्न थालेको थियो। 15915 मा उहाँले69 जहाजमा स्पेनिस फ्रान्सेलीस्क मिसनरीहरू, तीन जापानी जेसुइटहरू र सातौं जापानी मसीहीहरू नागासाकामा क्रान्तिकारी आदेश दिनुभयो। ।
1580s र 1590 को दशक को अन्त मा, हिड्योशीशी कोरिया को राजा सेरोजो को लागि धेरै शत्रुहरु पठायो, देश को माध्यम ले जापानी सेना को लागि सुरक्षित पारित गर्यो। हिड्योशीशीले जोसेन राजालाई जानकारी दिए कि उनी मिंग चीन र भारतलाई जित्न चाहन्थे। कोरियाली शासकले यी सन्देशहरूलाई कुनै जवाफ दिएनन्।
1592 फेब्रुअरीमा, 140,000-बलियो जापानी सेनाले केही 2000 डुङ्गा र जहाजको आर्मेडामा पुग्यो। यसले दक्षिण कोरियामा बुसानलाई आक्रमण गर्यो। हप्ताहरूमा, जापानले सियोललाई राजधानीमा उन्नति गर्यो। राजा सिओन्जो र तिनको अदालतले उत्तर भागेर राजधानीलाई जलायो र लुटे। जुलाईसम्म, जापानीले पियोगाउङङ पनि आयोजना गरे। युद्धग्रस्त समुराई सेनाले कोरियाको चासोको रूपमा तलवारको मक्खनमा कोरियाई रक्षकहरूको माध्यमबाट काट्यो।
भूमि युद्ध हाइडोशी को बाटो चला्यो, तर कोरियाई नौसेना श्रेष्ठले जापानको लागि जिन्दगी गाह्रो बनायो। कोरियाली बेडाले राम्रो हतियार र अधिक अनुभवी नाविकहरू थिए। यो पनि एक गोप्य हतियार थियो - लोहे-क्लड "कछुआ जहाजहरू" जुन जापानको अधीनमा राखिएको नौसेनाको तोपको लागि अपमानजनक थियो। उनीहरूको खाना र गोला बारुद आपूर्तिबाट कटौती, जापानी सेनाले उत्तरी कोरियाको पहाडहरूमा बिग्रेको थियो।
कोरियाली एडमिरल यी सन 13 13 15 15 मा हान्सन-डो युद्धमा हाइडनीसीको नौसेनामाथि एक विनाशकारी विजय हासिल गरे। छिमेकीले कोरियाली नौसेनाका साथ संलग्नताको लागि आफ्नो बाँकी जहाजहरूलाई आदेश दिए। 1593 को जनवरी मा, चीन को वानली सम्राट को बेरोजगार कोरिया को मजबूत गर्न को लागि 45,000 सेना पठायो। साथसाथै, कोरियाली र चिनियाँले हाइडोशीको सेनालाई पियोगान्डाबाट बाहिर निकाले। जापानीलाई पिनमा राखियो, र उनीहरूको नौसेनाले आपूर्ति वितरण गर्न सकेन, उनीहरु भोक गर्न थाले। मध्य मई, 1593 मा, हाइड्योशीले आफ्ना सेनाहरूलाई जापानमा घर फर्के र आदेश दिए। तथापि उनले आफ्नो मुख्य भूमि साम्राज्यको सपनालाई त्यागेनन्।
15999 को अगस्तमा हाइडोशीले कोरियाको विरुद्धमा दोस्रो आक्रमण बल पठाए। तथापि, कोरियाली र उनीहरूको चिनियाँ सहयोगीहरू राम्रो तयारीमा थिए। तिनीहरूले सियोल छोटो जापानी सेनालाई रोकाए, र एक धीमी, पीस ड्राइभमा बसान तिर फर्केर फर्के। यसबाहेक, एडमिरल यी एक पटक फेरि जापानको पुनर्जीवित नौसेना सेनालाई कुच्याउँथे।
हाइडिओशीको भव्य साम्राज्य योजना सितंबर 18, 1599 मा समाप्त भयो, जब तिको मरे। उनको मृत्युमा राखी, हाइड्योशीले आफ्नो सेनालाई यो कोरियाली भग्नावशेषमा पठाउँदा पश्चात्ताप गरे। उनले भने, "मेरो सैनिकहरू विदेशी भूमिमा आत्माहरू बन्न नदिनुहोस्।"
हिड्नेशको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता उसले मर्छ, तथापि, उहाँका वारिसको भाग्य थियो। Hideyori मात्र पाँच वर्ष उमेर थियो, आफ्नो पिताको शक्ति मान्न असक्षम भयो, यसैले Hideyoshi परिषद को पांच एल्डरहरु लाई स्थापित गर्न को लागी जब सम्म उमेर देखि आए उनको रिजर्भेसन को रूप मा शासन गर्न। यस परिषदले टोगुगावा इयोजु, हाइडोसोसको एक पटक प्रतिद्वंद्वी समावेश गरेको थियो। पुरानो टाइको आफ्नो वरिष्ठ डाइमोबाट आफ्नो सानो छोरोमा वफादारीको वेश्या निकालिदिनुभयो र सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक खेलाडीहरूलाई सुन, रेशमका र तलवारहरूको बहुमूल्य वरदान पठाउनुभयो। उनले हर्षोरीलाई ईमानदारीपूर्वक रक्षा र सेवा गर्न परिषदका सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत अपील गरे।
पाँच जना नेताहरूले कोइकोको मृत्यु धेरै महिनाको लागि गुप्त राखे र कोरियाबाट जापानी सेनालाई पराजित गरे। व्यवसायको त्यो टुक्रा पूरा भए तापनि, परिषदले दुईवटा विरोध शिविरहरूमा भत्काइयो। एक तरफ टोकुगावा इयोजु थियो। अर्को बाँकी रहेका अन्य एल्डरहरू थिए। इयुसुआ आफैले आफुको लागि शक्ति लिन चाहानुहुन्छ; अरूले छोटो हाइडोरीलाई समर्थन गरे।
1600 मा, दुई सेना सिखगुरा युद्ध मा चलिरहेको थियो। इयुस्वूले सफल पारे र आफैले शोगन घोषणा गरे। हाइडोरी ओसाका क्यासलमा सीमित थियो। 1614 मा, 21 वर्षीया हाइडोरीले टोपीगावा इआयोउलाई चुनौती दिन तयार पारेका थिए। इयौसु ने नवंबर मा ओसाका घेराबंदी शुरू गर्यो, उसलाई एक शान्ति सम्झौता को अक्षम र हस्ताक्षर गर्न मजबूर गरे। अर्को वसन्त, हाइडोरीले फेरि सेनालाई भेला गर्न कोसिस गरे। टोकुगावा सेनाले ओसाका क्यासलमा एक-अर्काको आक्रमण सुरु गर्यो, उनीहरूको भित्री भागमा घटेको र कमललाई आगो लगाउँछन्।
हिडीयोरी र तिनकी आमाले फेप्पाको काम गरे। उनको आठ वर्षीय छोरा टोकुगावा सेनाले कब्जा गरिरहेको थियो र सिरियामा राखे। त्यो टोयोटीमी क्याननको अन्त थियो। टोकुगावा शोगुनले 1868 को मेजी बहाली सम्म जापानलाई शासन गर्नेछन्।
यद्यपि उनको वंश जीवित थिएन, जापानी संस्कृति र राजनीतिमा हाइडोशीको प्रभाव निकै ठूलो थियो। उनले कक्षाको संरचनालाई बलियो बनायो, राष्ट्रलाई केन्द्रीय नियन्त्रणको आधारमा एकताबद्ध बनायो, र चाय समारोहको रूपमा लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रथाहरू। हिडीयोशीले आफ्नो प्रभु, ओडा नोन्गागा द्वारा एकीकरण शुरुवात गरे, टोकुगावा मैदान को शांति र स्थिरता को लागि मंच स्थापित।
Estados Unidos को ट्रेलर को लागि कुनै पनि प्रतिबंध छैन
जब यो प्लान्ट सूर्यमा ट्राफिक हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ?
लोब्ड पत्ता पत्ता वर्गीकरण
माध्यम संचार प्रक्रियामा के मतलब छ?
घरको स्कुल ट्रान्सक्रिप्ट कसरी सिर्जना गर्ने
विदियथको एरिसिक राजा र ईस्वी 410 मा रोमको पोखर
विस्कॉन्सिन-व्हाइट वाटर प्रवेश विश्वविद्यालय
संयुक्त राज्यमा बृद्धि
सर्वश्रेष्ठ समकालीन आत्मा कलाकारहरू
Alamo को युद्ध को बारे मा 10 तथ्यहरु
परमाणु रेडियस परिभाषा र रुझान
स्प्रिङको लागि तपाईंको डुङ्गाको हिसाब
अक्टोबर लेखन प्रोम्प्ट
Dalcroze विधि: एक प्राइमर
इतिहासको संगीत उपकरण
7 क्लासिक रक हडसन चलचित्रहरू
शीर्ष 10 क्रेट्रोक एल्बमहरू